Global Voices teny Malagasy » Rosia : Ny Fitroaran’ireo “Hamsters”-n’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Desambra 2011 3:18 GMT 1	 · Mpanoratra Alexey Sidorenko Nandika nirinandrea
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fifidianana, Hafanàm-po nomerika, Hehy, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia, Vaovao Mafana, Zon'olombelona, Akon'ny RuNet
Ny ampitson'ny androm-pifidianana , ireo Rosiana dia nivondrona mba hikomy ho fanoherana ny hosoka tamin'ny fifidianana. Na dia ho very seza 77 aza ny Antoko Rosia Mitambatra (United Russia) oharina amin'ny Duma teo aloha, araka ny vokatra vonjimaika, ny ankamaroan'ireo mpikomy dia mihevitra ilay fifidianana ho sady tsy madio, no tsy malalaka (jereo ny tatitray teo aloha mikasika ny famoretana vohikala  sy ny tatitra momba ny fanitsakitsahana ataon'ireo vohikala ).
Taorian'ny fikatonan'ny tranom-pifidianana ny 4 Desambra, ny hetsika Solidarnost  dia nanasa ireo mpanao hetsi-panoherana ho any amin'ny fiantsonan'ny fiarandalamby ambanin'ny tany ao Chistye Prudy, Mosko, raha toa ireo kaomionista, tsy faly ihany koa tamin'ny valim-pifidianana, nikarakara famoriam-bahoaka tao amin'ny kianja Pushkinskaya. Ireo solontenan'ny hetsika Solidarnost, izay ny ankamaroany dia tsy manana kianja ara-politika afa-tsy ireo hetsika an-dalàmbe sy ny eny amin'ny tontolon'ny bilaogy, dia nahavita namory olona an'arivony maro (raha toa ny tombana ka niovaova hatrany, ny vinavina azo raisina dia teo amin'ny olona 8.000 ka hatramin'ny 10.000 teo ho eo).
Nanomboka nivondrona ho amin'ny hetsika Solidarnost tamin'ny 7:00 hariva MSK ny olona. Georgiy Alburov dia nampakatra  ny sarin'ilay filaharana tao amin'ny vohikalan'ilay famoriam-bahoaka:
Ilay mpanao gazety britanika, Shaun Walker, dia nibitsika hoe  [ru]:
Nisavoritaka ny fandrakofana amin'ny ankapobeny satria ny Aterineto finday dia tsy nandeha intsony tao amin'ny faritra ary tsy afaka mampakatra lahatsary sy sary intsony ny olona. LiveJournal dia nitahiry ny fitrangan-javatra rehetra ato  [ru].
Ny alina ihany vao afaka mampakatra lahatsary [ru] avy amin'ilay famoriam-bahoaka ny olona ary indrindra koa ny lahateny [ru] nataon'i Alexey Navalny, izay isan'ireo politisiana malaza indrindra tamin'ilay hetsika. Ny lahateniny no mety ho mamaritra ny votoatin'ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao :
Taorian'ny lahateny maro nataon'ireo politisiana avy amin'ny mpanohitra, dia nifindra tany amin'ny kianja Loubianka ireo vahoaka, toerana izay misy ny birao foiben'ny Sampan'asan'ny Fiarovana Federaly. Ilay lahatsary  [ru] nakarinà mpampiasa bigvane no mampiseho ireo Moskovita nifindra nankany Loubianka ary nihiakiaka ny hoe “Fifidianana malalaka” :
Roampolo minitra taorian'ny nangalàna ity sary manaraka ity, Alexey Navalny dia voasambotry ny polisy . Ilya Barabanov dia nosamborina, telo minitra taorian'i Navalny. (Jereo ity tatitra an-tsary tsara tarehy ity, fanadihadiana nataon'ny solontenan'ny ridus.ru ato  [ru].)
Lahatsary  hafa, izay nalaina avy tao anatinà fiaran'ny polisy, dia mampiseho ireo mpanao hetsi-panoherana miresaka ny momba ny karaman'ireo polisy, no sady mikakakaka mihomehy.
Mandritra izany, levada.ru, ilay vohikalan'ny Foibe Levada  mpanao fitsapan-kevitra sady fikambanana fanaovana fikarohana ara-sosialy, dia voatafiky ny DDoS  [ru] ary ireo zavatra raiketin'ny epic-hero.ru dia nesorin'ireo [ru] mpampiantrano azy.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/12/13/26281/
 famoretana vohikala: https://globalvoicesonline.org/2011/12/05/russia-election-day-ddos-alypse/
 fanitsakitsahana ataon'ireo vohikala: https://globalvoicesonline.org/2011/12/05/russia-no-violation-of-election-violations/
 dia nampakatra: https://twitter.com/#!/alburov/status/143705735375761409/photo/1
 nibitsika hoe: https://twitter.com/#!/shaunwalker7/status/143730749420478464
 lahateny : http://www.youtube.com/watch?v=Cd_yYhqU_SA
 Lahatsary : http://politomsk.ru/board/1-1-0-182
 ibitsihan'i : https://twitter.com/#!/kichanova/status/143773262432841728
 Foibe Levada: http://en.wikipedia.org/wiki/Levada_Center
 nesorin'ireo : http://vorewig.livejournal.com/914622.html